Tirada & shaqaalaha safaaradaha Soomaaliya ee debadda oo la xadiday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tirada & shaqaalaha safaaradaha Soomaaliya ee debadda oo la xadiday
27th July 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Dowladda Soomaaliya oo wadda qorshe dib u habeyn loogu smaeynayo safaaradaha debadda ayaa go’aamisay in xilligaan safaaradaha debadda lagu soo kobo 31 oo safaaradood oo mid kasta ay ka shaqeynayaan 3 dublamaasi oo kaliya.
Golaha wasiirrada ayaa dood dheer ka yeeshay muhiimadda uu leedahay in dib u habbeyn lagu sameeyo safaararadaha waddanka ee dalka dibeddiisa u yaalla kaddib markii ay wasaaradda Arrimaha Dibedda Soomaaliya golaha wasiirrada hor keentay si loo dadajiyo arrintan isla markaana loo soo celiyo Muuqaalkii saxda ahaa ee safaaradaha dalkeenna uu dibedda ku leeyahay.
Wasiirka Arrimaha Dibedda iyo Dhiiragelintna Maalgashiga Xukuumadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa warbaahinta la hadlay shirka golaha wasiirrada kaddib, waxa uu sheegay in Golaha wasiirrada Soomaaliya ay oggollaadeen in safaaradaha Soomaaliya ee dibedda tiradooda lagu soo koobo 31 safaaradood, Diblomaasiyiintana laga dhigo seddex, guud ahaan Shaqaalaha Safaaradaha Soomaaliya ka shaqeyana laga dhigo 93.
“Arrintan ku aaddan in la tayeeyo safaaradaha Soomaaliya waa qorshe ay wasaaradda Arrimaha Dibedda muddooyinka ka shaqeyneysay, waa wijigii dalkeenna, waxaa hubaal ah in uu soo noqon doono haddii aan saxdo muuqaalka Safaaradaha xiriirka dhabta ah ee Caalamka iyo midka Diblomaasiyadda adduunka aan la leenahay, waxaana u mahadcelinayaa golaha wasiirrada oo qaaday Tallaabbo geesinnimo leh, oggollaadeyna in Safaaraha dalka dib u habeyn lagu sameeyo, sida ugu dhaqsyaha badan ayaa loo arki doona isbaddel” ayuu yiri wasiirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.
Wasiir Bayle ayaa sidoo kale sheegay in arrintaan ay ka danbeeysay dhaqaalo yari dowladda Federaalka Soomaaliya soo foodsaaray, taasna ay garawsatay wasaarada in ay dib u habeeyn ku sameeyso Safaaradaha Soomaaliyeed ee caalamka ku yaala.
Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay iney xirtay ilaa 5 safaaradood oo ku kala yaallay qaar ka mid ah dalalka dunida.
Nabadsugida oo xirtay masuuliyiin ka tirsan maamulka degmada Kaxda
Wiil Soomaaliyeed oo ay naafeeyeen burcad Koonfur Afrikaan ah oo codsaday kaalmo caafimaad (Sawirro)